Qiimaha Taariikheed ee Telefoonada Gacanta | Martech Zone
Qiimaha Taariikheed ee Mobilada
Talaado, Disembar 20, 2011 Talaado, Disembar 20, 2011 Adam Yar
Mar kasta oo aan arko mid ka mid ah kuwan taariikhda ee maqaallo ama sawir-gacmeedyo, marwalba waxaan dareemaa xoogaa da 'ah. Runta haddii loo sheego, anigoo in muddo ah ka shaqeynayey warshadaha moobiilka, waxaan lahaa taleefannno badan oo liiskan ku yaal!
Markii taleefanka gacanta la soo saaray tobannaan sano ka hor, wuxuu ahaa aalad ugu horreyn ay adeegsadaan booliska, darawallada tagaasida iyo kuwa xamuulka qaada, ama kuwa ugu taajirsan ganacsiga. Maanta, taleefannada gacantu way faafayaan oo ma socon kartid shan tallaabo adigoon arkin qof hadlaya ama qoraal diraya. Wanaagsan, aaladuhu waxay leeyihiin awoodo dheeri ah iyo qayb yar oo ka mid ah qiimaha taleefanka shalay. Laga soo bilaabo Savings.com Infographic.
In kasta oo qarashyada taleefannada laga yaabo inay hoos u dhaceen (taasina waa muhiim sababta oo ah dadka aan awoodin kombiyuutarada hadda waxay xiriir la leeyihiin internetka, shabakadaha bulshada iyo midba midka kale), ma hubo in qorshooyinka billaha ah ay gebi ahaanba hoos u dhaceen qiime ahaan qiimaha dheeraadka ah ee qoraalka, xirmooyinka xogta iyo khidmadaha dheeraadka ah iyo canshuuraha!
Hal shay oo joogto ahaa oo sii soconaya ayaa sii kordhaya waa isticmaalka farriinta qoraalka. Badanaa waxaa loo diraa tikniyoolajiyad duug ah, hal shirkad ayaa dhowaan ii sheegtay inay tahay hubkooda sirta ah… bixinta 8x heerarka beddelka ee ololeyaasha kale ee mobilada iyo khadka tooska ah!